Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Hinmụaka Raphinha Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
Ihe omuma anyi nke Raphinha - Raphael Dias Belloli - agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata. Ọzọkwa, eziokwu na mmalite nke ndụ ya, ndị nne na nna ezinụlọ, enyi nwanyị / nwunye ga - abụ, Ndụ na Net Worth.
Na nkenke, edemede a na-egosi akụkọ ihe mere eme nke Raphael Dias Belloli. Lifebogger malitere site na nwata ya na Brazil, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama Leeds United.
Iji nye gị ekpomeekpo nke ọdịdị Bio a, nke a bụ nchịkọta ihe atụ banyere ọnọdụ ndụ ya.
Biography nke Raphinha - Leeds United Footballer.
Ee, gị na gị ma na ọ dị Marcelo Bielsa si dike. Bụ otu n'ime Nyefe Leeds mere azụmahịa nke 2020, Raphinha bụ ọkachamara na bọl.
Onye Brazil yiri Angel di Maria na usoro. Anyị maara Raphinha maka ọsọ ọsọ ya, aghụghọ, nnukwu mmetụ mbụ, anya maka obe na ikike iti ndị na-agbachitere ya otu n'otu.
N'agbanyeghị nkwanye ugwu ahụ, anyị ghọtara na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ Raphinha. Anyị edoziela ya maka ụnụ ịgụ akwụkwọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ nke Raphinha Childhood:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-ebu ezigbo aha; Raphael Dias Belloli. Raphinha bụ naanị aha otutu. A mụrụ ya na 14th ụbọchị nke ọnwa 1996 maka nne na nna ya, Mr na Mrs Maninho Belloli. Ebe amụrụ onye bọọlụ bụ obodo Porto Alegre, nke dị na ndịda Brazil.
Ndị nne na nna Raphinha nwere ya mgbe ọ dị obere, ọ dị ka nna ya si mba ọzọ. Nna na-eto eto (Maninho) bụ onye whiletali mgbe mama ya bụ onye Brazil.
Dị ka a hụrụ, ndị ịgba ọsọ na-ewere mkpụrụ ndụ nne ya - nke gosipụtara ike na ezinụlọ ya.
Zute nne na nna Raphinha. O juru gị anya na papa ya bụ onye ọcha?
Raphael Dias Belloli AKA Raphinha nọrọ ụbọchị nwata na Restinga. Nke a bụ mpaghara dị umeala n'obi na Porto Alegre.
Ọ bụ otu n'ime obodo ndị Brazil nọ ná mkpa nwere ụmụ amaala meriri na ndụ site na egwuregwu.
Ndị na-agba ọsọ Leeds United adịghị iche. Ọ nọ n'etiti ụmụaka ndị ahụ ritere uru n'ụkpụrụ egwuregwu bọọlụ dị otú ahụ.
Steven Nzonzi Nwa akwukwo akuko karia eziokwu
Ezigbo ezinụlọ Raphinha:
Na Restinga, ndị ụlọ Belloli bụ ndị ama ama maka imepụta talent bọọlụ. Anyị onwe anyị Raphinha nwere aha nna a ma ama.
Ndị Bellolis na-arụ ọrụ n'ezinụlọ etiti, ha na-etinyekwa ọrụ ha na football.
N'ụlọ ahụ na-egwu egwuregwu, Raphinha bụ onye kasị nwee ọhụụ n'ọgbọ ya. Ndị na-agba ọsọ bọọlụ Brazil ahụla nke ọma na egwuregwu kachasị mma.
Eziokwu bụ, ọ dịghị akụkọ ọ bụla gbasara akụkọ akụ na ụba nke Raphinha's Biography ma ọ bụrụ na ọ tara ahụhụ nke ukwuu ka ọ bụrụ ndị na-agba ama. N'ihi ya, ezinụlọ ya biri ma mee ka ụmụ amaala Brazil.
Ndị na-agba ọsọ sitere na mpaghara mpaghara mepere emepe kachasị na Porto Alegre nke Brazil. You na-echeta obodo a?… Ọ bụ ebe obibi maka egwuregwu bọọlụ bọọlụ - Ronaldinho.
Nke a bụ ebe ezinụlọ Raphinha si.
Raphinha nwere ezinụlọ ya site na Restinga, ụlọ nke obodo 27 dị iche iche. Mpaghara a nwere ebe ama ama na-akpọ Ilhota.
N'agbanyeghị na o si n'ógbè ahụ bịa, ndị ịgba ọsọ ụkwụ abụghị ogbenye dịka nna ya na-arụsi ọrụ ike emeghị nke ahụ.
Nnyocha nwere ya na Mr Maninho Belloli, ya na ndị ezinụlọ ya (gụnyere Raphinha), nwere amaala Italiantali.
Mmụta na Ọrụ Buildup:
Raphinha, dị ka ọtụtụ ụmụaka na-agba ọsọ bọọlụ, agabigaghị usoro agụmakwụkwọ nkịtị.
Nwatakịrị ahụ nwetara agụmakwụkwọ bọọlụ na Monte Castelo. Nke a bụ otu n'ime otu nnukwu olulu iyi mmiri nke ebe izu ike.
Ọtụtụ ndị na-eto eto gafere ụlọ akwụkwọ football a ghọrọ ndị ọkachamara. Ọ bụ ezie na Raphinha bụ onye kachasị eme nke ọma n’ime ha.
Site na mgbọrọgwụ ezinụlọ footballing, onye ọ bụla amaralarị ụdị àgwà o nwere.
Ọbụna dịka nwatakịrị, Raphinha nwere ndị okenye na egwuregwu ndị idei mmiri na-agba. N'oge ahụ, ọ na-emechu ụmụ nwoke ihere site n'ịgbanye na ịchọta ihe mgbaru ọsọ.
Raphinha Untold Football Akụkọ nke:
Ka nwatakịrị ahụ toro, ọ nọgidere na-azụ ahịa ya nke na-enyere ndị otu ya aka imeri ihe niile. N'oge ahụ, ụdị egwuregwu Raphinha dọtara uche dị ukwuu site na ndị ọkachamara na football.
Ha na-enwekarị ekele maka bọl bọl sitere n'obodo ya. N'ime ndị dị otú ahụ bụ akụkọ ifo Ronaldinho.
Na mbu, nwatakiri ahu di egwu banyere nzute akuko football. Nzute nke mbụ Ronaldinho dị ka ịhụ nnukwu dike site na akwụkwọ ọchị.
Ka Raphinha chere na ihe niile na-aga nke ọma, ọ maghị na oge nsogbu na-abịa.
Daybọchị ọ zutere Arụsị ya. Nwatakịrị ahụ chere na ọ na-agụ akwụkwọ na-atọ ọchị.
Dịka nwatakịrị, ọ bụ nrọ nke Raphinha ka ya na Sport Club Internacional kpọọ. Nke a bụ otu n'ime egwuregwu klọb ndị kachasị ewu ewu na Porto Alegre.
N'ụzọ dị mwute, ọchịchọ dị otú ahụ emezughị. Nnukwu ụlọ ahụ jụrụ Raphinha (ugboro atọ) n'ihi na ọ dị oke nro.
Learịọ ụlọ ọrụ ahụ maka ihe kpatara ya ga-esonye ya dabara na ntị chiri. Ọbụna onye ọrụ Raphinha gwara Internacional ka ọ hụ ihe kpatara ya; na ndị egwuregwu kachasị mma n'ụwa dị mkpụmkpụ, na-ahụ ụzọ Lionel Messi dị ka ihe ọmụmụ.
N'agbanyeghị nke ahụ, ụlọ ike bọọlụ jụrụ ịnakwere Raphinha dara ogbenye.
Maninho Belloli, papa ya na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ gbara ya ume ka ọ ghara ịda mbà. N'oge na-adịghị anya, Raphinha chịkọtara obi ike wee gawa njem ọzọ.
Ọ gara njem maka awa 7 (Porto Alegre na Santa Catarina) na-achọ ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ. N'okwu nke aka ya;
Mgbe ọjụjụ ahụ gasịrị, ahapụrụ m Restinga na Porto Alegre n'isi mbido. Enwere m ọtụtụ awa n'ime bọs, ebe ọ bụ na erighị nri ọ bụla.
Raphinha Bio - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Na njedebe nke ọwara ahụ, olileanya bịara. Avaí Futebol Clube, otu ndị otu egwuregwu bọọlụ Brazil na Santa Catarina, megheere ya ọnụ ụzọ.
Onye nkụzi ha lekọtara nwata nwoke dị obere ahụ. N'ebe ahụ, Raphinha malitere ezigbo ọrụ ọkachamara.
Raphinha mechara biri na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke weere ya dị ka ezinụlọ.
Na February 2016, Avaí malitere inwe nsogbu ịkwụ ndị ọrụ ha ụgwọ. Nke a hụrụ ha ka ha na-eme mkpebi siri ike nke ịre ọla ha dị oke ọnụ (Raphinha) na Europe.
Na-awụ akpata oyi n'ahụ, Deco - onye bụbu Chelsea na FC Barca kpakpando nyeere Raphinha aka na Europe. Ọ ghọrọ onye nnọchi anya na-enyefe ya na mpaghara Portuguese Portuguese Vitória Guimarães.
Deco rụrụ ọrụ dị mkpa na ọrụ Raphinha.
Raphinha Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Leahapụ ezinụlọ na ịnagide ọdịbendị ọhụụ bụ ahụmịhe mmụta pụrụ iche. Onye Brazil nwere ike imeghari ka o diri ịrị elu meteoric na Portugal.
N'oge mbụ ya, Raphinha meriri 2017 Vitória Guimarães Breakthrough Player of the Year award.
Ihe dị ka Mee 2018, klọb ahụ zigara ya Sporting CP, ụlọ nke Cristiano Ronaldo si oge okorobịa. N'ebe obibi ọhụrụ ya, Raphinha si na ike gaa ike.
Nke a doro anya dịka ọ n'akụkụ Bruno Fernandes nyeere ndị Green na ndị ọcha aka inweta Ta botha de Portugal na Taça da Liga.
N'ezie, ụfọdụ ụbọchị ebube na Sporting.
N'ihi na ọ dị mkpa ịnụ ụtọ ọdịbendị French, Raphinha nwetara nrọ ọzọ. Oge a, ka Rennes - otu ọgbakọ o nyeere aka ịbanye na nke atọ Ligue 1 na njedebe nke Njikọ Njikọ.
Kama ịghọrọ mkpụrụ nke ọrụ ya, oge na-esote ya na Rennes, Raphinha gara n'ihu. Enye ama etiene esịt esie - isan̄ enye emi, ke ukpono.
Raphinha kwanyere oku Leeds United ugwu site na Marcelo Bielsa. Echefula, ọ bụ otu n'ime ndị isi nchịkwa Football.
Mgbe ọ na-ede akwụkwọ ndụ ya, nkwụsi ike Raphinha ka bụ ihe atụ. Ọ bụ nnukwu ọkpụkpọ maka Leeds United- otu n'ime ndị otu egwu Bekee.
Mmekọrịta nke Brazil na ihe mgbaru ọsọ Chibuike Nwokocha dị mma. Ngwakọta ya na-aga n'ihu na winger - Jack Harrison - emepụtala ọtụtụ oge na-egbuke egbuke.
Obi abụọ adịghị ya, Raphinha ahụwo ihe ịga nke ọma ebe ọ bụla football duru ya. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Raphinha's Girlfriend? O nwere nwunye ma obu nwa?
Mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama, ọ bụ ihe nkịtị maka ndị agbụrụ ịtụ anya na ọ ga-ekwupụta nwanyị nke ndụ ya.
Na mbido 2021, anyị ghọtara na onye na-alụ ọgụ ka alụbeghị di mana ọ dị njikere ịgwakọta naanị ya. Nke a pụtara na Raphinha nwere ike ịnwe enyi nwanyị ọ na-ewere dị ka nwunye ya na nne nke ụmụ ya.
Nye ndị na-agba bọọlụ ọ bụla, ọ dịghị mfe ịfefe ihe ruru ugboro anọ n'ime oge nke afọ abụọ.
Ma gịnị kpatara o ji dị mfe Raphinha ime mgbanwe ngwa ngwa na mba ọzọ? N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị banyere ụdị onye ọ bụ n'èzí.
Nke kachasị, nwatakịrị nwoke a jụrụ ajụ na-enweta ike n'akụkọ ihe mere eme ya si na Restinga rue Premier League.
Raphinha na-agbanwe n'ihi na o kwere ezinụlọ ya nkwa na ya ga-eme ka nrọ ha dịrị site n'aka ya. Ọ naghị ewere ọdịda dị ka nhọrọ. N'okwu Raphinha;
Kwa ụbọchị, m na-agwa onwe m na ọ bụghị naanị banyere nrọ m. Ọ bụ nke ndị mụrụ m, ụmụnne m na ndị ikwu m.
Ndia bu ndi ma ihe m gabigara ma nọnyeere m site na mbido. Ana m ewere aha ahụ mgbe niile - Restinga - ebe ọ bụla m gara. Ọtụtụ ndị mmadụ maara aha m, mana B NOTGH my akụkọ ihe mere eme m.
Ezigbo ndụ Raphinha:
Maka ndị South America, obi ụtọ na-abịa na ebili mmiri. Kama ịnya ụgbọ ala mara mma, Raphinha na-ahọrọ ime ka ọha na eze nwee oke osimiri.
Nke a bụ otú o si emefu ego bọọlụ ya.
N'ime afọ ise nke ahụmịhe ọkachamara (malite na 2015), ọ dị mma ịsị na ọ bara ọgaranya. Anyị na-eme atụmatụ ọnụọgụ ego nke Raphinha dị ihe ruru nde pound atọ.
Ndụ ezinụlọ nke Raphinha:
N’ụlọ Maninho Belloli, ịhụnanya na-asọsi ike ma dị omimi. Mgbe ụfọdụ, ọ na-enye ha mmetụta n'echeghị echiche banyere otu ha siri bịa ogologo oge. N'ebe a, Raphinha na-akpọrọ nna ya, mama ya na nwanne ya ka ha nwee ọ enjoyụ na mbara igwe nke Catalunya - na Barcelona.
Oge ezinụlọ bụ oge obi ụtọ maka onye Brazil.
N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị ihe ndị ọzọ gbasara ndị mụrụ ya na ndị ezinụlọ ya. N’etughi oge ozo, ka anyi gbaa.
Banyere Nna Raphinha:
Mgbe ha hụrụ foto nna nna ya, ọtụtụ ndị Fans jụrụ fans A nabatara Raphinha? Anyị emeela nchọpụta, azịza ya bụ Mba! N'oge edere Bio ya, Nna Raphinha kwesịrị ịnọ na 40s.
Fọdụ n'ime ndị ikwu Maninho bụ ndị Italiantali. Ọ na-enwe obi ụtọ na Raphinha ji bọọlụ gọzie ezinụlọ ya. Hụ otú nna na nwa nwoke si dabara, ọ na-ewe onye pụrụ iche ka ọ bụrụ obere nna dị ka Maninho.
Mmetụta gị ka bụ nwata ma nwee nwa nwoke nke na-eme nke ọma.
Banyere mama Raphinha:
Ndị na-agba ọsọ Leeds United ga-ahụ nwunye ya n'anya karịa, nna ya kachasị mma na nne ya ogologo oge.
Ọ na-arụ ọrụ nke ịkụziri ya otu esi akwadebe ma merie nsogbu dịka ha si eme. Mama Raphinha bụ onye Brazil site na mbido.
Zute nne mama Raphinha. Ha na-ele anya nke ọma.
Banyere Nwanna Raphinha:
Dabere na GloboeSporteGlobo, ndị ịgba bọọlụ nwere nwanne nwoke bi na Brazil. Naanị ya na-ahụkarị ya n'oge ezumike. Ọ dị ka nwanne ya nwoke nke okenye anaghị agba bọl dịka ọrụ.
Banyere ndị ezinụlọ Raphinha:
Ka anyi bido site na nne na nna ya ochie. Aha nna nna Raphinha bụ Osmar, onye a kacha mara amara dika Italiano. Ọ gbara bọl na 1960s.
Nwanne nna ya Seu Osmar na-egwuri egwu na Monte Castelo nke Brazil. O gosiputara ya na Cobal, ndi ozo ndi ozo sitere na agbata obi ezinulo.
Nke na-adọrọ mmasị, nwanne nna nna nke Raphinha, bụ Dudu, kpọọrọ Inter Milan. Onye ikwu a dị nso na papa ya, Maninho. Ha abụọ gbara bọọlụ ọnụ n'oge ha bụ nwata na iyi ide mmiri.
Eziokwu nke Raphinha:
Eziokwu # 1- Ihe mgbu nke Monte Castelo, bụ nwata ya Club:
Nke a bụ akụkọ banyere agụmakwụkwọ gwụrụ ebe Raphinha mụrụ bọọlụ. Ihe mgbu ha bụ na mgbe òtù egwuregwu bọọlụ ndị ọzọ kpọtụrụ klọb metụtara ọrụ Raphinha, ha na-eleghara Monte Castelo anya. Dị ka ọnụ na-ekwuchitere ya si kwuo;
FIFA amatabeghị anyị bụ ndị hibere bọọlụ. N'oge ahụ, anyị gara n'ụlọ ezinụlọ ya n'isi ụtụtụ, na-ejide Raphinha n'aka, ma tinye ya n'ụgbọala iji gaa ọzụzụ. Dịka nwatakịrị, anyị nwetara edo, akpụkpọ ụkwụ na bọọlụ iji mee ka ọganiihu ya nwee ike.
Anyị bụ ndị kpọpụtara Raphinha na ọ bụghị ndị ọzọ jidere ya ugbua. Anyị bụ ndị otu otu ọzụzụ nke chọrọ ụfọdụ ego enyefere ya.
Eziokwu # 2- Na-atụle ụgwọ ọnwa ya na Nkezi Obodo Citizen Brazil:
Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na Pound (£)
Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na Brazil n'ezie (R $)
Kwa Afọ: £ 3,124,800 R $ 22,448,322
Ọnwa kwa: £ 260,400 R $ 1,870,693
Kwa Izu: £ 60,000 R $ 431,035
Kwa :bọchị: £ 8,571 R $ 61,576
Kwa elekere: £ 357 R $ 2,565
Nkeji nkeji: £ 5.9 R $ 43
Sekọnd: £ 0.09 R $ 0.7
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Raphinha'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Dịka, onye na-arụ ọrụ na Brazil na-akpata ihe dị ka 8,560 BRL kwa ọnwa. Nwa amaala dị otú a kwesịrị ịrụ ọrụ afọ 18 na ọnwa abụọ iji nweta ụgwọ ọnwa ọ bụla nke Raphinha.
Eziokwu # 3- Eziokwu Ụdị:
Raphinha Tattoos na-agwa ọtụtụ ihe gbasara akụkọ ihe mere eme ya.
Na-ekwu na o nwere nanị ole na ole inks bụ nnukwu nkwupụta. Kpakpando bọọlụ nwere plethora nke akpachapụrụ anya nke ọma. Ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile na ogwe aka ya, ụkwụ ya na azụ ya - onye nke ọ bụla na-akọ akụkọ pụrụ iche banyere akụkọ ntolite ya.
Eziokwu # 4- Inyeghachi ndi agbata obi ya:
Ka ị na-eme nke ahụ, Leeds United winger gbara ụmụaka ume ka ha ghara ịda mbà na nrọ ha, na ịgbaso ihe bụ nke ha.
Nke a bụ n'ihi na naanị otu onye nwere ike ime ka nrọ ha mezuo bụ onwe ha na ọ dịghị onye ọzọ.
Eziokwu # 5- FIFA stats:
Raphinha bụ otu n'ime ndị na-agba ọsọ ụkwụ na-enwe mmụba ọsọ ọsọ na egwuregwu vidiyo egwuregwu.
The nkọ winger udeme yiri n'ozuzu Fim na Richarlison ma enwekwu ike. N'ihi ngbanye aka ya na ike ya, Raphinha bụ n'ezie ịzụta ihe maka ndị hụrụ ọnọdụ njikwa FIFA n'anya.
Biography nke Raphinha - Leeds United bọọlụ - na - akuziri anyị otu ihe. Na ọ na-ewe ọtụtụ obi ike ịkwanye n'oge ihe isi ike. Dị ka anyị hụrụ na anyị dere, onye Brazil ahapụghị nrọ ya mgbe ọ jụrụ ịjụ ya.
Taa, ọ n'akụkụ Carlos vinicius (nwanne nwoke) ahụwo ihe ịga nke ọma na oge mbụ ha na England. Ihe mgbaru ọsọ mbụ nke Premier League maka Raphinha (megide Everton) bịara n'isi ụtụtụ. Ọ na-akwado eziokwu na ọ nwere ike imeghari na njikọ kacha sie ike n'ụwa.
Ọ dị anyị mkpa ịja ndị ezinụlọ Raphinha mma maka ime ka ọ ghọta na ọ nweghị ike ịgbanwe ihe mechara mee ya. Nke a nyere ya ike iga n’ihu, hapụ ya gafere. Taa, ndị mụrụ ya, nsogbu na ndị ọzọ guzo n'akụkụ ya ugbu a na-ekere òkè n'ebube football ya.
Ezigbo ndị na-agụ akwụkwọ, daalụ maka oge gị na ncheta a. Jiri obiọma hapụ òkè na ngalaba nkọwa, echiche gị banyere ndị ịgba egwu Leeds ma ọ bụ nyocha ọ bụla na-adịghị mma na ederede anyị. Iji nweta nchịkọta ngwa ngwa nke Raphinha's Bio, jiri nchịkọta okpokoro anyị.
Aha zuru ezu: Raphael Dias Belloli.
aha otutu: Raphinha.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 14 nke December 1996.
Obodo amụrụ: Porto Alegre, Brazil.
Age: 24 afọ na ọnwa 10.
Ndị nne na nna: Maninho Belloli (Nna). Nne amaghi.
Ezinụlọ Ezinụlọ: Ebe obibi, Brazil.
Religion: Iso Christianityzọ Kraịst.
Ogo na mita: 1.76 m
Ightkwụ dị elu: 5 ft 9 sentimita asatọ.
Ọnọdụ egwuregwu: Akuko